ठूला लघुवित्तहरुमा कुन बढी सबल, प्रमुख सूचकहरुमा कसको छ अग्रता ?
काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ९ लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ माथि रहेको छ । यो वर्ष स्वावलम्वन र जीवन विकास लघुवित्तको चुक्ता पुँजी पनि १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यसअवधिमा लघुवित्त कम्पनीहरुको नाफालगायतका प्रमुख सूचकहरुमा वृद्धि भएको छ । अधिकांश सूचकहरुमा छिमेक लघुवित्त अगाडि रहेको छ । माइक्रोफाइनान्सहरुमध्ये अधिकांशले बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी बढाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय भने यो समूहमा पनि मर्जर लहर चलेको छ । थोरै पुँजी भएका माइक्रोफाइनान्सहरुमा विशेषगरी मर्जरमा जाने प्रवृत्ति वृद्धि हुन थालेको छ । पुँजी कोष दरिलो बनाउनुपर्ने बाध्यता माइक्रोफाइनान्सहरुलाई पनि रहेको छ । अब हेरौं, धेरै पुँजी (१ अर्बभन्दा माथि) भएका माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुमा कुनको अवस्था कस्तो छ ?
चुक्ता पुँजीमा छिमेक लघुवित्त अगाडि
सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी छिमेक लघुवित्तको रहेको छ । यसको चुक्ता पुँजी २७% ले बढेर २ अर्ब ३२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, निर्धान उत्थानको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १९ करोडभन्दा धेरै छ । यसअवधिमा एनआइसी एसिया लघुवित्त बाहेक सबै कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढेको छ । सबैभन्दा धेरै पुँजी बढ्नेमा जीवन विकास लघुवित्त परेको छ ।
यसको चुक्ता पुँजी १५१.८५% ले बढेर १ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसले यसै वर्ष आइपीओ जारी गरेको र लगानीकर्तालाई आकर्षक बोनस सेयर पनि दिएका कारण चुक्ता पुँजीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । यो वर्ष जीवन विकास लघुवित्तसँगै स्वावलम्वन लघुवित्तको चुक्ता पुँजी पनि १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
जगेडा कोषमा पनि छिमेक लघुवित्तकै अग्रता
यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष छिमेक लघुवित्तको रहेको छ । तथापि, यसको जगेडा कोष गत वर्षको भन्दा ३०.९१% ले घटेर २ अर्ब ४० लाख ४३ हजार रुपैयाँमा आएको हो । यसअवधिमा ६ कम्पनीको जगेडा कोष बढेको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढ्नेमा एनआइसी एसिया लघुवित्त रहेको छ । यसको जगेडा कोष ६४.९३% ले बढेर १ अर्ब ३१ करोड १६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानीमा पनि छिमेक लघुवित्त नै अघि
सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी कमाउने छिमेक लघुवित्त रहेको छ । यसको खुद ब्याज आम्दानी १५.११% ले बढेर १ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअवधिमा ६ कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी १ अर्ब माथि छ । एक वर्षको अवधिमा निर्धन उत्थान र स्वावलम्वन लघुवित्त बाहेक अरु सबै कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी बढेको छ ।
खुद नाफामा निर्धन उत्थान लघुवित्तको अग्रता
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै खुद नाफा कमाउनेमा निर्धन उत्थान लघुवित्त रहेको छ । यसको नाफा १२.२९% ले बढेर ८० करोड २६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । छिमेकले ७१ करोड ७१ लाख २ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा छिमेक र डिप्रोक्स लघुवित्त बाहेक अरु कम्पनीको खुद नाफा बढेको छ । सबैभन्दा धेरै खुद नाफा बढ्नेमा स्वावलम्वन लघुवित्त रहेको छ । यसको नाफा ९८.८७% ले बढेर २८ करोड ४२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिसेयर आम्दानीमा जीवन विकास लघुवित्त अगाडि
सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी जीवन विकास लघुवित्तको रहेको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ७४ रुपैयाँ ४६ पैसा छ । यसले यसै वर्ष आइपीओ जारी गरेकाले अघिल्लो वर्षको प्रतिसेयर आम्दानी वित्तीय विवरणमा उल्लेख छैन । एक वर्षको अवधिमा ५ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ भने ३ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ ।